Manni Maree Ministirootaa murteewwan dabarse – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
On May 22, 2020 446
Finfinnee, Caamsaa 14, 2012 (FBC) – Manni Maree Ministirootaa walga’iisaa 83ffaa har’a gaggeessen murteewwan addaddaa dabarse.
Manni marichaa fayyadama qabeenya ji’ootarmaaliirratti fooyyessa labsii dhiyaaterratti mari’atee akka ragga’uuf Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataa FDRIf ergeera.
Weerara vaayrasii koroonaa ittisuurratti ogeeyyiin tajaajila fayyaa laatan jireenya dhuunfaa ofii fi maatii isaanii aarsaaf dhiyeessuun waan ummata tajaajilaa jiraniif doorgoon si’eessituu fi faayidaan akka herreeggamuuf qajeelfama ba’erratti mari’atee hojiirra akka oolu raggaasiseera.
Wixinee labsii baajata dabalataa bara baajataa 2012 mootummaa federaalaa fi diinagdee maakroo fi fiiskaalaa bara jiddugaleessaa (2013-2017) dhiyaaterrattis mari’atee sirreeffama itti ida’uudhan akka ragga’uuf Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataatif ergeera.
Dambii beenyaa lafaa; lammiilee misoomaf kaafamaniif kaffalamuu fi deebisanii dhaabuuf qophaa’erratti mari’atee sirreeffama itti ida’uudhan Gaazexaa Nagaaritiin maxxanfamee akka hojiirra oolu murteessera.
Kaabineen Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee murtee dabarse
Muummeen Ministiraa Dooktar Abiy Ahimad maatii isaanii waliin ta’uun guyyaa har’aa…
Wiirtuuleen alergii jimaa qonnaan bultootaan durfaman sadii ijaaramuufi jedhame
Mariin hidha haaromsaa Ityoophiyaa fi itti fayyadama lageen idil addunyaarratti…
Naannoo Oromiyaatti lakkoofsi namoota Covid -19 qabamanii…
Ityoophiyaatti Dabalataan Namoota 169 Irratti Vaayrasiin…
Guutinsa bishaanii Hidha Haaromsaatif torbee itti aanu…
Qorannaa sa’aa 24 darbeetin namoota 150 irratti…
Muummeen Ministiraa Dooktar Abiy Ahimad maatii isaanii…
Wiirtuuleen alergii jimaa qonnaan bultootaan durfaman sadii…
Oduu biyya keessaa1860